Talaado, July 7 , 2020-Maxkamadda gobolka Banaadir oo dib u dhigtay dacad loo haysto weriye Cabdicasiis Gurbiye – LaacibOnline
Talaado, July 7 , 2020-Maxkamadda gobolka Banaadir oo dib u dhigtay dacad loo haysto weriye Cabdicasiis Gurbiye
Talaado, July 7, 2020 (HOL) – Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta dib u dhigtay dhegaysiga dacwad loo haysto Cabdicasiis axmed Gurbiye oo katirsan warbaahinta Goobjoog, kaasoo ku eedaysan inuu geystay gef iyo been abuur ka dhan ah madaxweynaha Soomaaliya.Weriye Gurbiye ayaa bartamihii bishii Abril wuxuu bartiisa facebook kusoo daabacay qoraal ku saabsanaa in madaxweyne Farmaajo uu qaatay mashiinka neefta siiya sanbabada oo loogu deeqay Isbitaal Martiini.Qareenka udoodaya ayaa sheegay markii weriyaha la horkeenay maxkamadda in ay hor-istaageen eeda iyagoo kasoo horjeestay in dacwada weriyaha lagu salleeyo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed.
“Maadaama uu weriyuhu yahay qof xirfad leh laguma qaadi karo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Qodobka 29-aad ee xeerka saxaafada ayaa nidaaminaya dacwada loo haysto weriyaha,” ayuu yidhi Carab Daahir oo ah qareenka udoodaya weriye Gurbiye.
gobolka Banaadir markii ay dhegaysatay qareenada iyo xafiiska xeer
ilaalinta waxay sheegtay inay go’aan kasoo gaaridoonto eeda weriyaha loo
haysto in lasii wadi karo ama in la joojiyo.
Madaxweyne Farmaajo ayaa saddexdii bishii May, ballan qaaday in xeerka Ciqaabta Soomaaliyeed ee duugoobay ku sameynayo dib u eegis, isaga oo intaa raaciyey inuusan ku habboonayn in lagu maxkamadeeyo wariyeyaasha.
← Chelsea fans will love what Gary Neville said about Christian Pulisic during Crystal Palace win
Full list of destinations as UAE’s Emirates, Etihad, flydubai expand network →
Jimco, Oct 30, 2020-Ayax dhibaato ba’an ku haya beeraleyda iyo xoola dhaqatada gobolka Shabeellaha Dhexe
Waxaan keenay Raysal wasaare waayo-arag ah oo waddaniyaddiisu ay sarreyso